Ukufakela isithombe ekhaya
Indlela yokunyuka kwexesha lehlobo ekhumbuza kwakhona iingxaki zokuqhwala: ziziphi iindlela ezikuko abafazi besimanje abangakulungele ukulahla "izityalo" ezingadingekile emzimbeni. Akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo, ukususela apho isikhumba somzimba, sihlanjululwe, saqala ukuthathwa njengento enhle, i-aesthetic kunye nokulungiswa kakuhle. Kodwa kwaziwa ukuba nakwabesifazana baseYiputa abancinci bayibopha imilenze yabo, kwaye amantombazana amakhoboka ayengabinwele. Kwiimatronsi zaseRoma zakudala ngendlela ebuhlungu kakhulu, zalahla iinqwelo ezinyaweni zabo ngamaRoma: izigqila zaziphosa ngentambo kwaye zazisusa. Ukusetyenziswa kwe-wax for epilation kubangelwa ngamakhoboka ka-Osman owokuqala - umfundisi waseTurkey, owayeneminyaka engaphezu kwewaka eyabetha izancinza kwiindawo ezihlala kuyo. Ngokuqhelekileyo, yiyiphi ibhinqa kuphela eyakhelwe ukwenza ulusu lufezeke ngokufanelekileyo: imishini yokucheba, i-wax, ukususwa kweenwele zeshukela, ukususwa kweenwele ze-laser kwi-salon. Zonke ezi ndlela zenza iingxaki ezininzi: i-micro-trauma, ukuvuvukala nokucaphukisa, izixhobo zamakhemikhali zisoloko zibangele ukubola, njl njl. Ukongezelela, abaninzi abanakuyithandi ukuhlaselwa kwindlu yekhabini - rhoqo ukuhlaziswa kubangelwa ngumnye umntu omele ahambe kwinkqubo enjalo.
Kweli hlabathi lanamhlanje, ukuphuhlisa ngamandla ngokukodwa kwiminyaka elishumi edlulileyo, indlela yokubonakalisa i-photofilation yabonakala, eyakhawuleza iphumelele ukuthembela kwabasetyhini, kuba inika ithuba lokususa iinwele ezingadingekile ixesha elide. Ukusebenza kwesicelo kucaciswe ngempembelelo yokukhanya okugqithiseleyo kwi-follicle kunye neentloko zeenwele, ezichithwa ngumonakalo wokukhanya. Ngelishwa, amaninzi amabhinqa aphantsi kweempembelelo zeengcamango ezahlukeneyo kunye neengcinga zeengcinga, kwaye ngoko-ke ayithembi ngokuthe ngqo indlela entsha.
Ukufakela isithombe kwiindonga zendlu akuyona inkolelo!
Kuze kube kutshanje, abaninzi bakholelwa ukuba ukufundwa kwezithombe kungenziwa kuphela kwiiofisi zonyango okanye kwiidonons ezihle. Ininzi nje yakutshanje, yonke into yayifana nalokhu: irekhodi kwinzululwazi kwi-salon, inkqubo yeenkqubo kunye nemali eninzi, esekelwe ekupheleni. Beka le mali ingahlawulelwa ukuba ayinayo yonke intokazi.
Ngeli xesha, le nqubo ingenziwa ekhaya isebenzisa iifowuni zokufakela isithombe sasekhaya. Ziyakuvumela ukuba ususe ngokusesikweni iinwele kuyo nayiphi na inxalenye yomzimba, kubandakanywa kwimimandla ekhethekileyo, kufaka phakathi i-bikini enzulu. Le nkqubo ifumana ukuthandwa ngokuphindaphindiweyo, ngokuyinhloko ngenxa yobuchule bayo obukhulu kunye nosizi olungapheliyo. Ukusebenzisa i-photoepilators yasekhaya akukho mfuneko yoqeqesho olongezelelweyo. Abakhiqizi baqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo kunye nekhono lokuqhuba inkqubo yokwenza i-photoepilation ngokwabo.
Kungekudala, iinkampani ezahlukahlukeneyo zikhuthaza ukusetyenziswa kwezixhobo ezifanayo, ukusetyenziswa okungama-5-6 amaxesha angaphantsi xa kuthelekiswa nenkqubo ekhitini. Ukuba uqikelela ukuba ubude bentsebenzo malunga neminyaka engama-3-7, ke kulula ukubala uqoqosho lwayo ekhaya. Nangona kunjalo, ukwenza ukhetho kwi-photoepilator ekhaya, kuya kuba mnandi ukwazi ukuba izinto ezilungileyo, eziphezulu ze-photoepilation zibiza ngokuphindaphindiweyo. Umenzi, okunciphisa iindleko zesixhobo, njengomthetho, kunciphisa amandla, kwaye ngoko ke ukusebenza kakuhle.
Bobabini kwi-salon nakwikhaya, kukho iinkqubo eziliqela ezifunekayo ukufezekisa umphumo oyifunayo: ukukhanya okukhanyayo kwi-shaft shaft kunokwenzeka kuphela kwisigaba sokukhula kweenwele ezisebenzayo. Kufuneka uye wazi ukuba ngokuhamba kwesikhathi, ezinye iifollic "zinokuvuka" kunye neenwele ezihlukeneyo ziya kuvela. Qaphela, kufuneka ubhekiselele kwii-insurances zokuthengisa ukuba xa ukufakela isithombe esingafunekiyo kwintsimi kuya kuthatha umhlalaphantsi ngonaphakade. Ngelishwa, oku akuyinyaniso: iinkqubo ezimalunga ne-10-12 ziya kukunceda ufezekise umphumo oyifunayo. Kuninzi kule meko kuxhomekeke kwisakhiwo kunye nohlobo lweenwele, imeko yomzimba kunye nemvelaphi ye-hormonal.
Ukufakela isithombe kufana neenzuzo xa kuthelekiswa nelaser: akususa nje ubunwele obumnyama, kodwa nakwezinye iintlobo. Okubi kakhulu, umzekelo, banokubakhokelela kule nkqubo, grey okanye kakhulu, baqulethe i-melanin encinci.
Ukutshatyalaliswa kweefoto zokufakela ekhaya
Ukufakela isithombe njenge-salon, kwaye ekhaya linemibandela engqinelanayo. Isizathu sokwenqaba sifanele sibe zizifo zesikhumba kunye nezifo ezithintekayo, ukukhulelwa kunye ne-lactation, i-tan entsha, i-varicose veins. Ngoluhlu lweengqinisiso kubalulekile ukuba uqhelane nokubonisana kunye neengcali. Xa uqhuba ukufakela i-photofilation, ukubonisana nodokotela kuyimfuneko ebalulekileyo.
Ngokuqinisekileyo, ukhetho lwabafazi abaphupha kakhulu ngokukhawuleza, ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo ukuba babe ngabanikazi besikhumba esihle, esilungileyo nesilungileyo. I-cosmetology entsha ye-teknoloji yanyuka kwi-salons yasekhaya, ihlala kuphela ukuba wonke umntu azenzele yena ngokwakhe: ukuzama ifowuni yokufakela isithombe kwikhaya okanye ukuya kwi-salon enobuhle.
Isikhumba se Flabby kwisisu
Ukunyamekela umzimba ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokugcina isifuba sempilweni kwaye sihle?
Ukuhlaselwa ekhaya ekhaya
Yintoni ongayinika umfazi wesiganeko?
Yintoni eyenza ithoni yesisu ngexesha lokukhulelwa?
Imigaqo yoqhagamshelwano nge-imeyile emsebenzini
Yintoni eya kuba ngowama-2018 Inja ze-Scorpio
Pancake nge-caramel isiraphu
20 amabinzana amabi kakhulu ebhedi
Ubutyebi nobuhlwempu: umzabalazo wobucala
I-Cocktail ye-melon kunye ne-waton
I-Mustard esuka kwi-cellulite
3 i-styles ze-festive ezenza lula ukuzenza!
I-Shebbie chic ngaphakathi-ukuphefumlelwa kwendalo
Ikhukhi kunye ne-chocolate nut nut